नेपालमा अण्डरवर्ल्डको उदय, ‘भर्टेक्स’ प्रहरीका रोमियो ! शृङ्खला -२ - Dial 100 News
शनि, अशोज २, २०७८
काठमाडौँ। २०६० को आसपासबाट नेपालको ठेक्कापट्टा क्षेत्रमा गुण्डागर्दीले प्रवेश गर्यो । सुरुवातका दिनमा टि -मिलनले ठेकेदार सँग असुलीको काम गर्न थाले। टेण्डर मिलन (टि-मिलन) भनिने मिलन गुरुङ्गले हरेक ठेक्कामा आफ्नो भाग खोज्न थाले। जसको भागमा टेण्डर निस्कियो उसले अब केहि रकम टि-मिलनलाई समेत भाग लगाउनु पर्थ्यो। टि मिलनको यस धन्दामा उनका मुख्य सहयोगी थिए नेपाली सेनाको रेञ्जर बटालियन गणबाट भागेका रामेछाप दुरागाउँका सुजन पौडेल।
आँटिलो स्वभावका पौडेललाई राम्रै प्रयोग गरे टि -मिलनले। टि-मिलनसँग बस्दा पौडेलले ठेकेदार,ठेक्का,टेण्डर र ब्ल्याकमेलिङ्ग जस्ता कुराहरु नजिकबाट बुझे। त्यसबेला उनले केहि समय शशि अधिकारीसँग समेत नजिक रहेर काम गरे। टेण्डरकै बिषयमा विवादहुँदा एभरेस्ट होटलको स्विमिङ्ग पुलमा टि-मिलनले महेन्द्र खड्कामाथी चक्कु प्रहरी गरी हत्या गरेर फरार भए। हाल टि-मिलन बेलायतमा छन्।
६४ सालमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग (हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त) दरबारमार्गको टोलीद्वारा रविन एण्ड बास्किंग आइसक्रिम पसल अगाडी बाट अटोमेटिक पेस्तोल र त्यसमा लाग्ने गोलि सहित सुजन पौडेल पक्राउ परे। त्यतिबेला दरबारमार्गमा इन्स्पेक्टर ( हाल एसपी) रमेश थापा थिए। यो नै सुजन पौडेल पक्राउ परेको पहिलो घटना थियो। त्यसको २८ दिनपछि उनि धरौटीमा छुटे।
उनि त्यतिबेला सम्म सुजन पौडेल नै थिए। जब उनले शान्तिनगरमा सगुन श्रेष्ठमाथी गोलि हाने त्यसपछि उनी ‘रमेश बाहुन’को नामले गुण्डागर्दीमा उत्रिन थाले। भक्तपुरको एक टेण्डरमा गोलि चलाएपछि उनि एकाएक चर्चामा आएका थिए।
२०६४ कै अन्त्यतिर उनी फेरी बुटवलबाट पक्राउ परे। बुटवलबाट रमेश बाहुन सहित ५ जना उनका सहयोगी पक्राउ परेका थिए। उनीहरुको साथबाट प्रहरीले ४ थान हरियार बरामद गरेको थियो। पछि फेरी बाहुन धरौटीमा छुटे।
कसैको समुहमा नदेखिने बाहुनले त्यसपछि निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारलाई निशाना बनाउन थाले। हरेक ठेक्कामा उनलाई २ प्रतिशत भाग लगाउनु पर्ने अवस्था आयो। बाहुन समुहलाई पैसा नदिने ठेकेदारलाई उनी मार्नेसम्मको धम्कि दिन्थे। उनको धम्कि दिने तरिका फरक थियो। बाउनलाई पैसा दिन नचाहने ठेकेदारको उनका एक सहयोगीले रेकी गर्थे। घर,अफिस,गाडी, भेटघाट आदि सबैको विवरण पत्ता लागेपछि उनि फेरी ठेकेदारलाई फोन गर्थे र सबै विवरण सुनाउँदै मारिदिने धम्कि दिन्थे। अझै पैसा पाउने टुङ्गो नभएपछी उनी बिहानको ४ बजे ठेकेदारको घरमै पुग्थे। आफ्ना २ सहयोगीको साथमा २ मोटरसाईकलमा जाने बाहुन ढोका नखुल्दासम्म कुरेर बस्थे। जब ढोका खुल्थ्यो उनी सिधै ठेकेदारको सुत्ने कोठामा पुगेर पेस्तोल ताक्थे। कतिपय ठेकेदारका आमा,श्रीमती र बच्चाबच्चीको मुखमा समेत पेस्तोल छिराएर धम्कि दिनेगरेको केहि प्रहरी अधिकारीनै सुनाउँछन्।
रामेछाप ,सिन्धुली,काभ्रे,भक्तपुर,ललितपुर र काठमाडौँ (चक्रपथ बाहिर )को बाटो भएर हिड्ने गरेका बाहुन आफु बसेको ठेगाना आफ्ना सहयोगीलाई समेत देखाउने गरेका थिएनन। जसले गर्दा प्रहरीलाई समेत उनलाई खोज्न हम्मेहम्मे पर्थ्यो। स्थान परिवर्तन गरेर फोन गर्ने र फोन गरिसकेपछि फोन बन्द गरेर अर्कै स्थानमा बस्ने तरिकाले धेरैपटक प्रहरीबाट जोगिन सफल भए उनि।
धेरैजसो ठेकेदारहरु अब रमेश बाहुनको नामबाटनै डराउने भईसकेका थिए। केहि ठेकेदारले उनलाई प्रयोग गर्न थालिसकेका थिए। केहिले बाहुनलाई ठेक्काको साझेदार समेत बनाएका थिए। सोहि मध्यका एक थिए शरद कुमार गौचन। जो पछि बाहुनकै डिजाइनमा मारिए। गौचन निर्माण व्यबसायी महासंघको अध्यक्ष हुँदा धेरै ठेकेदारलाई ठेगान लगाउन उनले बाहुन परिचालन गरे। बाहुनले त्यतिबेलानै अनुमान लगाएका थिए गौचनको आम्दानी कति थियो भनेर। त्यतिबेला उनको विश्वासपात्र थिए बोकाको गे* भनिने गंगाबहादुर लिङ्देन। पछि उनी गौचन हत्यामा समेत प्रयोग भए। ठेक्काकै बिषयमा विवाद हुँदा अर्का गुण्डानाइके समिरमान सिंह बस्नेतले बाहुनको पोल्ट्री फर्ममा गोलि चलाएका थिए।
६२ करोडको सिंचाइको ठेक्काको बिषयमा ललितपुरका अर्का डन मिनकृष्ण महर्जन सँग उनको विवाद सुरु भयो। बाहुनले मिनकृष्णलाई तर्साउने योजना बनाए। तर यसको सूचना मिनकृष्ण सम्म पुग्यो। २०७०माघ ४ गते महर्जन र बाहुन समुहको जम्काभेट भयो। आफूमाथि आक्रमण हुने पूर्वसूचना पाएका महर्जनले पेस्तोल बोकेका थिए भने उनले प्रहरीका एक सईलाई साथमै लगेका थिए। बाहुनका सहयोगी दुर्गा राईले खुकुरी झिकेपछि महर्जनले पेस्तोल निकालेका थिए। त्यसपछि राई हच्किए। राईलाई महर्जनका सहयोगी मिलन सिलवालले नियन्त्रणमा लिए। त्यसपछि बाहुनले महर्जन र सिलवालमाथि गोलि प्रहर गरे। रमेश बाहुन मोटरसाईकलमा भाग्न लाग्दा प्रहरीका सईले बाहुनको तिघ्रामा २ गोलि हानेर फरार भए। बाहुन मोटरसाईकलमा भागे।सो घटनामा संलग्न संजय बाँनिया र मदुसुधन डोटेल पक्राउ परे।
बाहुन यतिसम्म चतुर थिएभने उनले आफु लाकुरीको जंगलमा लुकेको भ्रम सिर्जना गरेर एक डाक्टर सुरक्षा अधिकारीको घरमा लुकेर उपचार गराउँदै थिए। उनको खोजि गर्न गएको प्रहरीले लाकुरीको जंगलमा पेस्तोल र उनी लुकेको जस्तो देखिने ठाउँमात्र फेला पारेको थियो।
यसघटनाको एकबर्ष अगाडी घैंटे समुहको बाहुनसँग चिनजान भएको थियो। घैंटे समुहमा रहेका नेपालगंजका गुण्डानाइके रिगल ढकालसंग हाल नेपालगंजमै पेट्रोल पम्प संचालन गर्दै गरेका पूर्वप्रहरी मार्फत बाहुनको चिनजान भएको थियो। रिगललेनै बाहुनको भारतीय समाजबादी पार्टीका नेता विनायक सिंहका कान्छाभाई मनोज सिङसंग चिनजान गराएका थिए।मनोज सिंह आफ्नी प्रेमिका भेट्न नेपालगंज आउने क्रममा रिगल ढकाल संग चिनजान भएको थियो। रिगल गुण्डानाइके समिरमान सिंह बस्नेतसँग नजिक थिए।
घाइते भएका बाहुनको थप उपचार अस्पतालमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। प्रहरीको तिब्र खोजीमा थिए बाहुन। त्यसपछि बाहुन तिनै सुरक्षा अधिकारीको गाडीमा भारतको नाका सम्म पुगेका थिए। भारतमा बाहुन बिधायक विनायक सिंहको घरमा लुक्दै आएका थिए। यता बाहुनको खोजि प्रहरीले तिब्र बनाएको थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका (हाल टेकु) को इन्टेलिजेन्स शाखामा कार्यरत थिए इन्स्पेक्टर (हाल डिएसपी) कुमुद ढुंगेल। ढुंगेलले बाहुनको सम्पर्कमा रहेका एक व्यक्तिको भाईबरमार्फत बाहुनको लोकेसन पत्ता लगाएका थिए।
उता बाहुनको रेकी गर्न साडी ब्यापारीको भेषमा विनायक सिङको घरवरिपरि हिड्दा रेकी गर्ने एक प्रहरी र बाहुनको आँखा जुधेको थियो। पछि बाहुनले केहि मानिसलाई रेकी गर्ने र आफुलाई गोलि हान्ने व्यक्ति एकै रहेको समेत बताएका थिए।
प्रहरीको टोलीलाई बाहुन नेपाल ल्याउनुपर्ने थियो तर सकिरहेको थिएन। समिरले रिगलको बिषयमा कुमुद ढुंगेललाई जानकारी दिन्छन। रिगलले लखनाउँका डन मनोज सिङ आउने स्थान देखाईदिन्छन। प्रेमिका भेट्न नेपाल आएका मनोज नियन्त्रणमा लिगेपछी प्रहरीले ‘गिभ एण्ड टेक’मा बार्गेनिंग गर्छन र रमेश बाहुन भनिने सुजन पौडेल पक्राउ पर्छन।
रमेश बाहुनले परिषर हनुमानढोकाका तत्कालिन प्रमुख रमेश खरेललाई समेत धम्कि दिएका हुन्छन।हनुमानढोका प्रमुख खरेलले बाहुनको इन्काउन्टर गर्नु भन्ने स्पस्ट निर्देशन दिन्छन। खरेलको सो फोन बाहुनलाई सुनाएर बाहुन संग ‘तेरो ज्यान जोगाइदिन्छु’ भन्दै पैसाको समेत बर्गेनिङ्ग भएको अनुसन्धानमै संलग्न एक प्रहरी बताउँछन्। हनुमानढोका प्रमुख खरेल बिदामा रहेको समयमा बाहुनलाई किन पक्राउ गरियो ? किन जोगाईदिन्छु भन्दै पैसा मागियो ? धेरै प्रश्न उठिसकेका थिए। यसैबीचमा प्रहरीले रमेश बाहुन भनिने सुजन पौडेल र दुर्गे भनिने दुर्गा राई २८.४ ग्राम खैरो हिरोईन र पेस्तोल सहित काठमाडौँको खशीबजारबाट पक्राउ गरिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गर्छ।
२०७१ साल साउन १८ गते रमेश बाहुन भनिने सुजन पौडेल र दुर्गे भनिने दुर्गा राई लागुऔषध तथा हातहतियार मुद्दामा जेल चलान हुन्छन।
नेपालमा अण्डरवर्ल्डको उदय, 'भर्टेक्स' प्रहरीका रोमियो ! शृङ्खला -१
जिल्लामै पहिलो पटक स्तनपान कक्ष